Dawnmanhon( ဒေါင်းမာန်ဟုန် ): August 2008
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 11:58 AM0comments
ပေးပို့သူ။ ။ ကိုခိုင်ခန့်
ထိုင်းအစိုးရဖြုတ်ချရေး အုံကြွမှု အထွေထွေသပိတ်သို့ ဦးတည်
Bangkok Post/Agencies/ ၂၉ သြဂုတ် ၂၀၀၈
ကိုမိုးသီး ဘလောက်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ထိုင်းတောင်ပိုင်း ပြည်နယ်များဖြစ်သော ဆုံခလာနှင့် ဖူးခက်ရှိ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်အဖွဲ့ (ပီအေဒီ) ကိုထောက်ခံသူများက ဟတ်ယိုင်နှင့် ဖူးခက် နိုင်ငံတကာလေဆိပ် အ၀င်ပေါက်များကို ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်း၌ ပိတ်ဆို့လိုက်သည်။ ဘန်ကောက်ရှိ ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးဝန်းအတွင်း ဆန္ဒပြနေသူများ အား အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုမပြုရန် တောင်းဆိုသည့်အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရာနှင့်ချီရှိသော ပီအေဒီကို ထောက်ခံသူများက လေဆိပ်နှစ်ခုတွင်စုဝေးနေကြပြီး ဟောပြောစင်များ ဆောက်လုပ်ရန် ကြိုးစားနေကြသည်။ ရဲများနှင့် ပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြနေသူများအကြား ယခုအခါ အ၀င်ပေါက်များကို သော့ခတ်မှုမပြုရေး ညှိနှိုင်းနေကြသည်။
နိုင်ငံပိုင်ရထားပို့ဆောင်ရေး (အက်စ်အာတီ) သမဂ္ဂကလည်း ဘန်ကောက်ရှိ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကို ထောက်ခံသည့်အနေဖြင့် မြောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသများသို့ ပြေး ဆွဲနေသော ရထားပို့ဆောင်ရေးကို ယနေ့ညသန်းကောင်မှစပြီး ရပ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယမန် နေ့ကထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများကို အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေရုံသာမက ကုန်ပစ္စည်းစီးဆင်းရေးကိုပါ ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။
ထိုအတောအတွင်း ဆန္ဒပြသူများအပေါ် ရဲ၏ကြမ်းတမ်းမှုကို လက်တုံ့ပြန်သည့်အနေနှင့် သပိတ် မှောက်ကြရန် ထိုင်းအဲယားဝေး အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးက အဖွဲ့ဝင်တသောင်းခွဲကို နှိုးဆော် ထားသည်။
ပီအေဒီ အမာခံခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဆွန်ထိ ကလည်း နိုင်ငံတ၀န်းမှ ၎င်းအားထောက်ခံသူ များကို ဘန်ကောက် ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးအတွင်းရှိ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ၌ အမြန်ဆုံးလာ ရောက်ပူးပေါင်းကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ မစ္စတာဆွန်ထိက ယနေ့သည် “အဆုံး အဖြတ်ပေးမည့် နေ့” ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားသည်။
ယနေ့ နံနက်၌ ရာနှင့်ချီရှိသော အဓိကရုဏ်း နှိမ်နင်းရေးရဲများက တုတ်၊ ဒိုင်းများအသုံးပြု၍ ၀န်ကြီးချုပ်ရုံး
၀န်းအတွင်း ၀င်ရောက်ရန် ကြိုးစားသော်လည်း လက်ချင်းချိတ်ထားသည့် ပီအေဒီ ဆန္ဒပြ အဖွဲ့ဝင်များက ပြန်လည် တွန်းထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ အပြန်အလှန် တွန်းထိုးမှုများအတွင်း သေးထွက်သံယိုမှုမရှိကြောင်း ရဲများကပြောသည်။ နံနက် (၁၀) နာရီခွဲခန့်တွင်မူ ရဲများက အဆိုပါရုံးဝန်းနှင့် အဆောက်အဦးများအတွင်းသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မြန်မာ့နိင်ငံရေးက ဖယ်ထုတ်ဖို့ အကြံပေးတဲ့ ဆမတ်တယောက်တော့ထိုင်းနိုင်ငံရေးကဖယ်ရှားခံရဖို့နာရီပိုင်းပဲလိုပါတော့တယ်။ဆမတ်ရေအမျှ- အမျှ- အမျှ လို့ ပြောပါရစေ။ကျနော် အရင်က သုံးသပ်ထားသလိုပါပဲ။ အခုထိုင်းလူထု ဆန္ဒပြပွဲဟာ အရင်ကထက်ထူးခြားနေပါတယ်။ ဒါကတော့ဘုရင်၊ စစ်တပ် ၊ အတိုက်ခံပါတီတွေနဲ့ ဘန်ကောက်လူလတ်တန်းစားက ရှေ့ ဆုံးကပါဝင်နေပါတယ်။ ဆမတ် နောက်က ကျောထောက်နောက်ခံတွေကတော့ကျေးလက်ဒေသက လူထုတွေဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ကျေးလက်လူထုက ဆမတ်တို့ ဖက်ကိုပါနေတာလဲဆိုရင်တော့ တပ်ဆင်လက်ထက်ကတည်းက့ ရွာသူကြီးတွေနဲ့ ကျေးလက်ဒေသမှာသြဇာရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို ရွေးကောက်ပွဲကာလတွေမှာ ငွေနဲ့ ပေါက်ပြီးဝယ်ထားလို့ ကလည်းတကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:09 PM0comments
ကမ္ဘာကျော် Forbes မဂ္ဂဇင်းကြီးက The World's 100 Most Powerful Women မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဆင့် (၃၈)။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 1:49 AM0comments
ပခုက္ကူသံဃာတော်များက အာဏာပိုင်များ၏ လှူဒါန်းသည့်ပစ္စည်းမျာကိုလက်မခံပဲ လမ်းပေါ်တွင်ပစ်ချထား
မကွေးတိုင်း၊ ပခုက္ကူစာသင်တိုက်(၃)တိုက်မှ သံဃာတော်များက အာဏာပိုင်များလှူဒါန်းသည့် ပစ္စည်းများကိုလက်မခံပဲ လမ်းပေါ်တွင် ပစ်ချထားကြောင်း ပခုက္ကူမြို့ခံတဦးက ပြောသည်။ စာသင်တိုက်(၃)တိုက်သို့ လွန်ခဲ့သည့်လေးရက်ခန့်က အာဏာပိုင်များက ဆန်၊ဆီ အစရှိသည့် ပစ္စည်းများကို လာရောက်လှူဒါန်းရာ သံဃာတော်များက အဆိုပါပစ္စည်းများကို လမ်းမပေါ်သို့ ပြန်လည်ရွေ့ပြောင်းထားခဲ့သည်။
“အလယ်တိုက်ကဆို အဝင်ကတည်းက လုံးဝလက်မခံလိုက်တာ၊ အရှေ့တိုက်နဲ့ အနောက်တိုက် တို့ကတော့ လက်ခံပြီးမှ ပစ္စည်းတွေကို လမ်းပေါ်အကုန်ပစ်ထားလိုက်တာ”ဟု မျက်မြင် ပခုက္ကူမြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ သံဃာတော်များက အလှူပစ္စည်းများကို လက်မခံခဲ့သည့်နောက်ပိုင်း ပခုက္ကူမြို့ပေါ်ရှိ အဆိုပါစာသင်တိုက်အနီးရှိ မီးကင်းတဲများတွင် နေ့ညမပြတ် ရဲဝတ်စုံနှင့်အရပ်ဝတ်များ ဝတ်ဆင် ထားသည့် လုံခြုံရေးများ တိုးမြှင့်ချထားလာသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း ၄င်းကဆက်လက် ပြော သည်။
နေ့ရောညပါ မီးသတ်ကင်းတဲများတွင်လုံခြုံရေးချထားပြီး ည ၁၀ နာရီကျော်ခန့်မှစ၍ အယောက်(၂၀) ဦးထက်ပိုသည့် ရဲအပါအဝင်လုံခြုံရေးများက ကားများဖြင့် ယနေ့အထိ ကင်းလှည့် စောင့်ကြည့်မှုများရှိနေခဲ့သည်။
“ပစ္စည်းတွေလက်မခံတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်၊ အနောက်တိုက် အနောက်နားမှာ အတုလမုနိဘုရား မှာကင်းတဲ တခုရှိတယ်၊ အဲ့ဒီမှာလည်းစောင့်တယ်၊ ဘုန်းကြီးတွေက ဂွနဲ့ ဆွဲထုတော့ အဲ့ဒီကနေပြေးပြီး အခု(၁၂) ရပ်ကွက်က ခန်တော ကင်းတဲဘက်မှာ လုံခြုံရေး ချထားတာ” ဟု ပခုက္ကူမြို့ခံက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့တွင် ပခုက္ကူသံဃာတော်များက ငြိမ်းချမ်းစွာမေတ္တာပို့ လမ်းလျှောက်ကြွချီခဲ့ရာ ပခုက္ကူအခြေစိုက်တပ်ရင်းမှ ဗိုလ်မှူးမျိုးသန့်ဇင် ၊ မြို့နယ်ကြံ့ဖွံ့ စည်းရုံးရေးမှူး ဦးအေးမြင့်ဦးဆောင်အဖွဲ့တို့က အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ပြီး အနောက်တိုက်မှ အရှင်ပညာစက္ကနှင့် အရှင်ပညာနန္ဒတို့ ဓါတ်တိုင်တွင်ကြိုးဖြင့် တုတ်နှောင် ရိုက်နှက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသံဃာ့တပ်ပေါင်းစုကြီးမှ ပခုက္ကူသံဃာတော်များအပေါ် အကြမ်းဖက်ခဲ့သည့်ကိစ္စ ဝန်ချတောင်းပန်ရန်နှင့် အချက်(၄) ချက်ပါသည့် တောင်းဆိုမှုကို စစ်အစိုးရအား ရက်သတ်မှတ်တောင်းဆိုပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံအနှံ့သံဃာထု၏ မေတ္တာပို့ လမ်းလျှောက်ကြွချီ ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကြီး ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
ယမန်နေ့တွင် ပခုက္ကူခရိုင်ရုံးသို့ မြိုင်၊ ကံမ္မ၊ ပေါက်၊ ရေပြာမြို့တို့မှ မြို့နယ်အာဏာပိုင်များကို ဆင့်ခေါ်၍ ခရိုင်ဥက္ကဌ မှ ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာ စစ်တပ်၊ ရဲနှင့် အဓိကရုဏ်းနှိမ်နင်းရေးကားများ၊ သံဆူးကြိုးများပါ တွေ့မြင်နေရသည်ဟု ယနေ့ပခုက္ကူမြို့ခံက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 1:17 AM0comments
မင်းသားကြီး ကျော်ဟိန်း ရာသက်ပန်ဘုန်းကြီးဝတ်ပြီ
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 1:06 AM0comments
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:53 AM0comments
အင်္ဂါနေ့၊ သြဂုတ်လ 26 2008 14:11 - မြန်မာစံတော်ချိန်။ မဇ္ဈိမမှ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေကို စစ်အစိုးရ ပြသည်ထက် ပို၍မြင်အောင် မကြည့်နိုင်ခဲ့ဘဲ အခြေအနေမှန်များနှင့် ကင်းကွာနေပြီး၊ သူ၏ ခရီးစဉ်အတွင်း တွေ့ဆုံရမည့် အစီအစဉ်များကိုလည်း စစ်အစိုးရက စီစဉ်ထားသည့် အတိုင်းသာ လိုက်ပါ လုပ်ဆောင်ကာ ကန့်ကွက် ဆန့်ကျင်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း အန်အယ်ဒီက ဝေဖန် ထောက်ပြ လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
NLD ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက "သူ (ဂမ်ဘာရီ) က စစ်အစိုးရ စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း သွားပြီး သူတို့ ရုပ်ပြ လုပ်ထားတာတွေပဲ ကြည့်ခဲ့ရတော့ အခြေအနေမှန်ကို ဘယ်သိမှာလဲ။ တကယ့် အခြေအနေမှန်ကို ဒီလို အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ သိဖို့၊ နားလည်ဖို့ ဆိုတာလည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး" ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၆ ရက်ကြာခရီးစဉ်ကို စနေနေ့က အဆုံးသတ်ခဲ့သည့် နိုင်ဂျီးရီးယားလူမျိုး သံတမန်ကြီး၏ ဤမှတ် ချက် စကားသည် သြဂုတ်လ ၁၈ ရက် တနင်္လာနေ့က TCG အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံအပြီး ပေါ်ထွက် လာခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
"သူ (ဂမ်ဘာရီ) က စစ်အစိုးရကို အရမ်းကို မျက်နှာချိုသွေး နေတာပဲလို့ ကျနော်တို့ ခံစားရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ သူလုပ် ရမယ့် အဓိက လမ်းကြောင်းကနေ လမ်းချော်သွားတာပဲ" ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
"မြန်မာပြည်ကို လာသမျှ သံတမန်တွေအားလုံးဟာ ဒီအတိုင်းချည်းပါပဲ။ နအဖ က ကြည့်စေချင်တာကိုပဲ ကြည့်ရ တာပဲ။ ဒါနဲ့ပဲ နအဖ က ဟန်ပြလုပ်ထားတဲ့ ဟာတွေပဲ သူတို့ ကြည့်ခွင့်ရကြတာပဲ" ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလ အထူးသံတမန်အဖြစ် ၂ဝဝ၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် မစ္စတာရာဇာလီ အစ္စမေးလ် အပါအဝင် ယခင် ကုလသံတမန်များကို ရည်ညွှန်းကာ မက်သီဆင်က ပြောကြားသွားသည်။
"မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီဟာ နှစ်ဘက်လုံးကို ကြည့်ဖို့လိုတယ်" ဟုလည်း မက်သီဆင်က ပြောသည်။
ဤခရီးစဉ်အတွင်း ဒီချုပ်ခေါင်းဆောင်များနှင့် ၂ ကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ထိန်းသိမ်းခံ နိုဘယ်ဆုရှင်နှင့်လည်း တွေ့ဆုံခွင့် ရရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။ သို့သော် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ၏ ပြယုဂ်ခေါင်းဆောင်က သူနှင့်တွေ့ဆုံရန် ငြင်းဆန်ခဲ့ သည်။
သို့သော် ကုလသံတမန်ကြီးကမူ ကုလသမဂ္ဂ၏ ကြိုးပန်းဆောင်ရွက်မှုများ၏ အဆက်အဖြစ် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အ စည်းကြီး၏ အကြီးအကဲ မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် လာရောက် လည် ပတ် မည်ဟု ပြောဆိုသည်။
သို့သော် ပြည်ပရောက် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံခြားရေးဌာန တာဝန်ခံ ဦးညိုအုန်းမြင့်ကမူ အစိုးရ နှင့် အတိုက်အခံ ၂ ဘက်စလုံးကို စေ့စပ်ဆွေးနွေးကြရန် သြဇာအာဏာသုံး ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုနိုင်လျှင် ဂမ်ဘာ ရီ နှင့် ဘန်ကီမွန်းတို့၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်များသည် အချိန်ဖြုန်းခြင်း သက်သက်မျှသာ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ပြောဆို သည်။
"ဒီအချိန်ဟာ စစ်အစိုးရက မတွေ့ချင်တဲ့ တစုံတဦးကို စေလွှတ်ပြီး အချိန်ဖြုန်းနေမယ့်အစား မြန်မာစစ်အစိုးရက လက်ခံ နားထောင်နိုင်မယ့် သံတမန်တွေကို ကုလသမဂ္ဂက စေလွှတ်ရမယ့် တကယ်အရေးကြီးတဲ့ အခြေအနေ ရောက်နေပြီလို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်" ဟု ဦးညိုအုန်းမြင့်က ပြောသည်။
သန္တာရွှေ ကလေး သတင်း
ဦးသန်းရွေ သမီး သန္တာရွေရဲ့ ကလေးက အာရပ်ရုပ် လို အနောက်တိုင်း ရုပ်လို လို ထွက်နေတယ်လို့အတွင်းလူများကပြောနေကြပါတယ်။ ကလေးက မျက်လုံးပြူး၊ နာခေါင်းချွန် နေပြီး ကုလားရုပ်ထွက်နေတယ် မြန်မာရုပ်လုံးဝမထွက်ဘူးလို့Burma Army Medical Hospital တပ်မတော် စစ်ဆေးရုံက ကလေးကိုမွေးပေးလိုက်ရတဲ့ ဆရာဝန်များကပြောနေကြပါတယ်။ သန္တာရွေက နိင်ငံခြားရေးရုံးတာဝန်နဲ့ နိင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးကြောင့်း သိရပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ကလေးမွေးနေ့ ပွဲတွေဘာတွေကိုလုပ်မပေးပဲ သန္တာရွေကလည်း ကလေးကို ကြည့် ပြီးငူငူငေါင်ငေါင်ဖြစ်နေပါတယ်။ သန္တာရွှေ ခင်ပွန်း ဗိုလ်မှုး ဇော်ဖြိုးဝင်းကတော့ ကလေးကို ကြည့် ပြီး စိတ်ပျက်လက် ဖြစ်နေပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သန်းရွေကတော့ ကလေးကိုကြည့် ပြီးမျက်နာပျက်သွားတယ်။ နဖူးကိုလက်နဲ့ ရိုက်လိုက်ပြီး ဟ- ကလေးကလည်း ကုလားရုပ်ပါလားလို့ ပြောကြောင်းသိရပါတယ်။
ဇော်ဖြိုးဝင်း အဖိုးဖွားတွေဖက်မှာ ဘိ်ုကပြားများပါလားလို့ ဇော်ဖြိုးဝင်းကိုလှည့် ပြီးသန်းရွေကမေးပါတယ်။ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ကတော့ကလေးကိုလက်ကမချဘူးလို့ ဗိုလ်ချုပ်ကတော်များက ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ အညာသားမှ မြန်မာစစ်တယ်၊ အညာသားတွေကိုမှာ တပ်မတော်ထိပ်ပိုင်းရာထူးတွေကိုသာပေးလေ့ရှိတဲ့ သန်းရွေဟာ ဒီတခါတော့ နာခေါင်းကျပွေ့ ထိပြီဟု တပ်မတော် အရာရှိကြီးများကဟာသလုပ်နေကြပါတယ်။ ထိုင်းနိင်ငံ Bumrungrad ဆေးရုံတွင် ကလေး DNA ကိုစစ်ဆေးရန် စီစဉ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 7:55 AM0comments
ကိုရင်လေး၂ပါးကို ဒုတပ်ကြပ်တဦးက ဖြားယောင်းခေါ်ဆောင်သွား
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:52 AM0comments
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 9:03 PM0comments
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 6:18 PM0comments
Protest against Gambari visit to burma
ပေးပို့သူ။ ။ ကိုမြင့်မောင်
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 11:48 PM0comments
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 11:44 PM0comments
( ဓာတ်ပုံ - မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ)
ရန်ကုန်မြို့ခံတို့ သတင်းပေးပို့ချက်အရ ရန်ကုန်မြို့တွင်းတွင် စစ်တပ်က လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ချထားသည်။ လုံ/ထိန်း ကားကြီးများကို လမ်းမများပေါ်တွင် တန်းစီပြီး အင်အားပြ ရပ်ထားခြင်းမှာ စစ်အစိုးရသည် အနှစ် ၂၀ တိုင်တိုင် တိုင်းပြည်ကို ငြိမ်းချမ်းသာယာအောင် တိုးတက်စည်ပင်အောင် အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း ပြယုဒ် သက်သေဖြစ်သည်ဟု မှတ်ချက်ချကြသည်။ ဓာတ်ပုံမှာ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအဖွဲ့က အင်တာနက်တွင် ဖြန့်ချိသည့် ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှေ့ မြင်ကွင်းဖြစ်သည်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:57 PM0comments
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 1:39 AM0comments
ရက်ပေါင်း(၁၇)မြောက် စိန်ခေါ် ဆန္ဒပြ
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 1:32 AM0comments
“ငြိမ်းချမ်းရေးတိုက်ပွဲ” အဆိုတော် မွန်းအောင်၏ သြစတြေးလျ ဖျော်ဖြေပွဲ။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 1:22 AM0comments
အန်အယ်လ်ဒီ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနှင့် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီတို့ ယနေ့ ညနေပိုင်း ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံတွေ့ဆုံနေ
NEJ/ ၂၂ သြဂုတ် ၂၀၀၈
ရန်ကုန်မြို့တွင်ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာဂမ်ဘာရီ၏ မေတ္တာရပ် ခံချက်အရ အန်အယ်လ်ဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းနှင့် မစ္စတာဂမ်ဘာရီတို့ ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံ တွေ့ဆုံနေသည်ဟု အန်အယ်လ်ဒီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က အတည်ပြုပြောကြားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မစ္စတာဂမ်ဘာရီတို့ ယခုအထိ တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်၏ ကျန်းမာရေးကြောင့်မဟုတ်ဘဲ တွေ့ဆုံရမည့်အနေအထားကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က လက် မခံနိုင်သဖြင့် မတွေ့ဆုံသေးခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီက ပြောသည်။ မစ္စတာဂမ်ဘာရီ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်မထွက်ခွာမီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံမည် မတွေ့ဆုံမည်ကို ယခုအထိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပေ။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:59 AM0comments
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:34 AM0comments
သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သံဃာ့သမဂ္ဂီအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း
ဗထူး။ ။ ရိုးမ(၃)
သာသနာတော်၏အကြပ်အတည်းနှင့် မြန်မာတပြည်လုံး၏ အကြပ်အတည်းများကို ဝိနည်းတော် နှင့်အညီ ပါဝင်ကူညီဖြေရှင်းပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့သမဂ္ဂီအဖွဲ့ကို ယခုလ (၁၆) နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းကြောင်း အဆိုပါအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။
မန္တလေးသံဃာထုပေါ်အခြေခံကာ ပခုက္ကူ၊ ညောင်ဦး၊ ကျောက်ပန်းတောင်း၊ ရေနံချောင်း၊ အမရပူရ၊ မကွေးနှင့် စစ်ကိုင်းမြို့မှ သံဃာကိုယ်စားလှယ်များကိုရွေးချယ်ကာ သံဃာသမဂ္ဂီ အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု ပြည်ပတာဝန်ခံ အရှင်ပညာဇောတက ယနေ့မိန့်ကြားသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့ကြီးကို အဓိကအားပြုပြီးတော့ သံဃာတပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ရဲ့ လုပ်မဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လက်ရှိအဖွဲ့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက် အဓိကအားဖြင့်ပါတယ်၊ ဘာသာ၊ သာသနာအပေါ်မှာညှင်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အပိုင်းတွေ၊ အမျိုးသား ရေးကိစ္စမှာ အားနည်းနေတဲ့အချက်အလက်တွေအတွက် အမျိုးသားရေးတာဝန်တွေကို သံဃာ့ တပ်ပေါင်းစုနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွဲ့တာပါ” ဟု အရှင်ပညာဇောတက မိန့်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုများပြီးသည့်နောက် စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ကြံ့ဖွံ့နှင့် စွမ်းအားရှင်အဖွဲ့ဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းများအား ဘာသာရေးအခြေခံစာပေများ သင်ကြားပေးကာ စာသင်တိုက်၊ ကျောင်းတိုက်ကြီးများသို့ ကိုရင်၊ ရဟန်းအသွင်ဆောင်ကာ ဝင်ရောက်၍ အမျိုးသားရေးအား စိတ်ဝင်စားသည့် ရဟန်းသံဃာများကို နှိမ်နင်းရန် လုပ်ဆောင် ခဲ့သည်ဟု ဆက်လက်မိန့်ဆိုသည်။
“အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဲ သူတို့ကိုသူတို့ ရဟန်းအစစ်အမှန်အယောင်ဆောင် လုပ်ပြီးတော့ ဝိနည်းနဲ့ မအပ်စပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်လာတာ တွေ့ရတယ်။ အဲ့လိုလုပ်တော့ သာသနာကို အကျည်း တန်အရုပ်ဆိုးစေတယ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကြည်ညိုလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရဟန်းသံဃာတွေ အပေါ် ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေတယ်၊ ဒါတွေမဖြစ်ဖို့အတွက် သံဃာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေ ကိုယ့်မြို့နယ်လေးတွေမှာ ကိုယ်နိုင်သလောက်လေးတွေကို တာဝန်ယူမယ်၊ စောင့်ရှောင့်မယ် ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီအဖွဲ့ကိုဖွဲ့တာပါ” ဟုမိန့်သည်။
စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ယခုအချိန်တွင် ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာသံဃာ့လှုပ်ရှားမှုအား အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းခဲ့သည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့နီးလာသည်နှင့်အတူ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်တိုက်များနှင့် ရဟန်းသံဃာများအသွားအလာကိုပါ အဓိက သတိထားစောင့်ကြည့်နေလျှက်ရှိသည်။
ယနေ့ထုတ်မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင်လည်း စစ်တွေမြို့နယ်၊ ဆတ်ရိုးကျနှင့် ဗျိုင်းဖြူ ကျေးရွာမှ သံဃာအတုအယောင် (၆) ဦးအားပုဒ်မ၂၉၅(က) အရ အရေးယူဆောင်ရွက်နေ ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့ပေါ်ရှိ ဂိုဏ်းပေါင်းစုံပြည်နယ်နှင့်မြို့နယ်သံဃာ့နာယကအဖွဲ့ ဆရာတော်ကြီးများထံ ခေတ္တပြည်နယ်သာသနာရေးမှူး ဦးတင်ဝင်းက သာသနာရေးဆိုင်ရာ လျှောက်ထားချက်သတင်းကို ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းသတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အရှင်ပညာဇောတက စားဝတ်နေရေးကြပ်တည်းသဖြင့် ဖြေရှင်းရန် အမြင်ဖြင့် သက္ကင်္န်းဝတ်ကာ အယောင်သူများလည်းရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ “သူတို့ကိုယ်၌က ကြံ့ဖွံ့၊ စွမ်းအားရှင်ကလူတွေကို သီလပေးတတ်အောင်လုပ်မယ်၊ ရေစက်ချတတ်အောင်လုပ်မယ်၊ ပရိတ်လေးရွတ်တတ်အောင်လုပ်မယ်၊ ဘာသာရေးအခြေခံ လေးနည်းနည်းပါးပါးသင်မယ်၊ အဲ့လောက်လေးတတ်ပြီးရင် ဘာသာရေးထဲမှာ ဝင်ရောက် ဖျက်ဆီးတယ်၊ သူတို့က ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်ဖို့ အကွက်ချပြီးလုပ်နေတယ်ဆိုတာ ဦးဇင်းတို့ သိရတယ်ဟု စစ်အစိုးရလုပ်ဆောင်နေမှုအား ထောက်ပြပြောဆိုသည်။
စက်တင်ဘာသံဃာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းကလည်း ထောင်သားများအား ကတုံးရိတ် သင်္ကန်း ဝတ်စေကာ ဝိနည်းနှင့်မညီသည့် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ခိုင်းပြီး သံဃာအစစ်အမှန်များက လုပ်သ ယောင် စစ်အစိုးက ဖန်တီးခဲ့သည်ဟု အရှင်ပညာဇောတက ဆက်လက်မိန့်သည်။
“နအဖကရော ဘယ်လောက်ထိအောင် စစ်မှန်လို့လည်း ပြည်သူတွေက ဘယ်လောက်ထိ သူတို့ ရဲ့အာဏာကို လွှဲထားတာရှိလို့လည်း၊ ၉၀ ခုနှစ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးပြီးတော့ တကယ်တမ်း ပြည်သူ့အာဏာကို ပြည်သူ့လက်ထဲလွှဲပြီးပြီလား၊ (၉၀) ခုနှစ်ကလည်း နအဖက လိမ်ခဲ့တာပဲ၊ လောကမှာလိမ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါပဲ၊ ရဟန်းသံဃာတွေကို လိမ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ နအဖ လိမ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ ရဟန်းသံဃာတွေက လိမ်တာများ သလား၊ နအဖက လိမ်တာများသလားဆိုတာ ပြည်သူတွေက ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်၊ ရဟန်း သံဃာတွေက မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပြည်သူတွေက ရဟန်းသံဃာဘက်က ရပ်ပါလိမ့်မယ်” ဟု သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု ပြည်ပတာဝန်ခံက ဆက်လက်မိန့်ဆိုသွားခဲ့သည်။
သံဃာအချင်းချင်းသွေးခွဲမှု၊ သံဃာတော်များအပေါ် ဝိနည်းတော်နှင့် မညီမလျှော်ညီသည့် ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်မှုများ၊ ဟန့်တားနှောင့်ယှက်မှုများ၊ ထိပါးစော်ကားမှုများကို ကာကွယ်သွားရန်၊ စစ်မှန်သောသံဃာထုအတွင်းသို့ ရဟန်းတု ရဟန်းယောင်များ ဝင်ရောက်စေ၍ အထင်အမြင် လွဲမှားမှုမှကင်းလွတ်၍ ငြိမ်းချမ်းစစ်မှန်သော သံဃာ့အဖွဲ့စည်းတည်ဆောင်ရန်နှင့် ပြည်သူလူထု ၏ အထွေထွေအကြပ်အတည်းများကို ဆရာဒကာလက်တွဲ၍ ဝိနည်းတော်နှင့်အညီ ကူညီဖြေရှင်း သွားရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း သံဃာ့သမဂ္ဂီအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 8:53 AM0comments
စစ်အာဏာရူးများလက်ထက် နာဂစ်မုန်တိုင်းအပြီး မြန်မာမိန်းကလေးငယ်များ၏ဘ၀
CNN's Dan Rivers looks at the impact Cyclone Nargis had as more women turn to prostitution to survive.
၈၈၈၈ ပြည်သူ့သတင်းစဉ် (အတွဲ ၀၁၊ အမှတ် ၀၄)
ပေးပို့သူ ။ ။ ကိုထွန်းဝေ (မင်္ဂလာဒိုး)
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:06 AM0comments
University student killed by police in upper Burma
Saturday, 16 August 2008 19:32
New Delhi — Authorities have heightened security in Monywa University in Sagaing Division of upper Burma, afterauniversity student was killed inafight on Thursday night.
Eyewitnesses said, at least seven police vans are seen parked in the University campus in Monywa City, afterastudent named Aung Kyaw Soe Win was killed duringafight near the university campus on Thursday night.
In an interview withaperson, who claimed to have witness the fight on Thursday, said Aung Kyaw Soe Win,asecond year Bachelor of Arts student in Monywa University, was killed while four of his friends were arrested after they were attacked by local policemen following an argument near the university campus on Thursday evening.
"The police told the students that since they had been singing political songs, they must come to the police station. The police threatened them that they will be beaten up if they do not go to the police station," the eyewitness told Mizzima.
"But the students refused to go and said 'we will not follow you, do what you want with us.' Then the policemen charged at the students," said the eyewitness, who requested not to be named for fear of reprisal.
Though the other three students fled, they were later arrested by the police and are currently in custody with Tun Min at the police station, he added.
But on the contrary,aBuddhist monk, who resides near the university campus and claimed to have heard of the incident said, the fight was not between the students and policemen but was between student rivals.
The No (2) Monywa Police station, when contacted by Mizzima, said they haveacase of brawl between students filed in the office but decline to further elaborate on the case.
A classmate of Aung Kyaw Soe Win in Monywa University, when contacted by Mizzima, said while he was not aware of Aung Kyaw Soe Win's death, "he has not come for class and I called out absent on his behalf."
He said police have filled up the university campus and have tightened security, though he is not aware of the police's apprehensions.
Aung Kyaw Soe Win's friend, who claimed to have seen his death body, however, said, "He was badly injured on his head and his skull was smashed. Their families covered his face withahandkerchief."
Aung Kyaw Soe Win and his friends on Thursday had sung political songs in front ofagirl's hostel, his friend told Mizzima in an email interview.
Though he was not in the group with Aung Kyaw Soe Win, he said, he heard them sing the Burmese 'National Anthem' and other political songs that are dedicated to Burma's Independence Hero - General Aung San.
In Burma, youngsters love to sing on the roadside at night, and University campuses are frequently filled with groups of young students roaming, with guitars and other light musical equipments, and singing at door-step of girl's hostels.
Inacountry, with little space for legal entertainment for young people, the practice of singing in front of girl's hostels or on roadsides has not been considered illegal or criminal.
Meanwhile, Aung Kyaw Soe Win's friend said, the police have reportedly told his elder brother that he was under the influence of alcohol and died inafight between students and warned him not to spread about the case.
Augn Kyaw Soe Win's friend said his body will be buried on Sunday.
Aung Kyaw Soe Win, who had come from 'Minn Tine Pinn' village in west of Monywa city, and was staying in Nandawun ward of Chan Mya Tharsi Township in Monywa, was pursuing his degree course in Law, according to his friend.
Reporting by Mizzima correspondent; writing by Mungpi.
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 4:33 PM0comments
အဆိုတော် ထူးအိမ်သင်ကွယ်လွန်ခြင်း (၄)နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ
... အသက်သည်အိပ်မက် ...
. . . . အိပ်မက်သည်သူ . . . .
(အဝေးသို့ ပျံသန်းသွားသော "ငှက်")
လူသိပ်မသိသေးတဲ့ ကိုငှက်ရဲ့ မျက်ကန်းချစ်ဆိုတဲ့သီချင်းလေးတပုဒ်ကို အမှတ်တရဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
အဘဦးထွန်းမြင့်(ကျန်းမာရေးအရာရှိ)နှင့် အမိဒေါ်မြရင်(သူနာပြုဆရာမကြီး)တို့မှ ၁၉၆၃ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၁)ရက်နေ့တွင် ပုသိမ်မြို့၌မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်း ၆ ယောက်အနက် သားအကြီးဆုံးဖြစ်သည် ။ ငယ်နာမည် သန်းထွန်းစိုးမှ ပြောင်းလဲခဲ့သော အမည်ရင်းမှာ ကျော်မြင့်လွင်ဖြစ်ပြီး ကိုငွေသီးဟုအဓိပ္ပာယ်ရသော “ပေါ်စွမ်း”ဟူသည့် မွန်ဘာသာဖြင့်ငယ်နာမည်လည်းရှိခဲ့သည် ။ သျှပ်၊ ဘဲဥ ၊ငှက်ကြီးစသည်ဖြင့်လည်း ချစ်စနိုးခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ထူးအိမ်သင်၏ဇနီးမှာ မသွယ်သွယ်ထွေးဖြစ်ပြီး သူ၏တစ်ဦးတည်းသော သမီးအမည်မှာမိကွန်ထော ဖြစ်သည်။
အ.မ.က (၂၀) ပုသိမ်‌တွင် မူလတန်းပညာကို သင်‌ကြားခဲ့ပြီး အ.ထ.က(၃) ပုသိမ်‌မှ အထက်‌တန်းအောင်‌မြင်‌ခဲ့သည်။ ၁၉၇၉-၈၀ တွင် ဧရာဝတီတိုင်းရှိ ပုသိမ်‌ဒေသကောလိပ်‌သို့တက်‌ရောက်‌ခဲ့သည်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်‌တွင် မိသားစုနှင့်အတူ မော်‌လမြိုင်‌သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးနောက် မော်လမြိုင်‌တက္ကသိုလ်‌မှ ရုက္ခဗေဒအထူးပြုဖြင့် သိပ္ပံဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
ဂီတနှင့်ပတ်သတ်သော ငယ်ဆရာများမှာ ဦးကျောက်စိမ်း နှင့် ဦးစန်းတင့်(လမ်းစဉ်လူငယ်ဘင်ခရာတပ်ဖွဲ့၊ ပုသိမ်မြို့) ဖြစ်ပြီး မော်လမြိုင်မြို့၌ ဦးအောင်စိုး ( KC.Francis ) ထံတွင် ဂီတပညာနှင့် ဂီတသင်္ကေတများကို ဆက်လက်ဆည်းပူးခဲ့သည် ။
၁၉၈၁ ဒေသကောလိပ်ကျောင်းသားဘဝတွင် “ မြ ” အမည်ရှိ ကျောင်းတွင်းကဗျာစာအုပ်ထဲ၌ ကလောင်အမည် သျှပ်မှူးကျော် ဖြင့် ကဗျာများရေးသားခဲ့သည် ။ ထိုစာအုပ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သော ကဗျာဖြစ်သည့် “ အမေ ... အမေ ဝမ်းရည်စပ်တယ်ဆိုရင် ခွင့်လွှတ်ပါ ။ သားရင်ထဲမှာ ကဗျာ ” ဟူသော ကဗျာမှာ သူ့အား ကဗျာဆရာအဖြစ်ထင်ရှားအမှတ်ရစေခဲ့သည် ။ ထို့နောက် ၁၉၈၂ တွင် ကလောင်အမည် လင်းထက် ဖြင့် “မြတ်နိုးခြင်းအားဖြင့် ကြင်နာသည်ဖြစ်၍ ” ဝတ္ထုတိုကို ရှုမဝ မဂ္ဂဇင်းတွင် စတင်ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရသည် ။ လင်းထက် နာမည်ဖြင့်ပင် ကဗျာရေးခဲ့သည် ။ သူ၏ အခြားကလောင်အမည်တစ်ခုမှာ ရဲသင်ရန် ဖြစ်သည်။ ထူးအိမ်သင် အမည်ဖြင့် ရေးသားခဲ့ပြီး ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့သည့် တစ်ပုဒ်တည်းသောကဗျာမှာ “သက်တန့်မြစ်” ဖြစ်ပြီး သရဖူမဂ္ဂဇင်း(ဟောင်း) နှစ်ပတ်လည်အထူးထုတ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည် ။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် "နာရီပေါ်မှမျက်ရည်စက်များ" တေးစီးရီးဖြင့် ဂီတလောကသို့ စတင်ဝင်‌ရောက်ခဲ့သည်။ ထူးအိမ်သင်သည် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းအများစုကို ရေးသားသီကုံးခဲ့ပြီး ဂီတပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၆ မှ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ကွယ်လွန်သည်အထိ တစ်ကိုယ်တော်တေးစီးရီးပေါင်း ၁၄ ခွေ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ဂီတညီအစ်ကိုမောင်နှမများနှင့်အတူ တွဲဖက်သီဆိုခဲ့သော စီးရီးပေါင်း များစွာရှိခဲ့သည် ။ --စာရေးဆရာမ ဂျူး ၏ ရေမြောသီး အမည်ရှိ အသံထွက်ဝတ္ထုခွေ တွင် မြရဲ့လ ဝတ္ထုတိုကို ရွတ်ဖတ်ပေးခဲ့သည် ။
၁၉၈၈ အရေးအခင်းအပြီးတွင် မြန်‌မာနိုင်‌ငံလုံးဆိုင်‌ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်‌တစ်‌တပ်‌ဦး(ABSDF)၌ ပြန်‌ကြားရေးတာဝန်‌ခံအဖြစ် အဆိုတော်‌မွန်းအောင်‌ နှင့် အတူ ခေတ္တမျှ တာဝန်‌ထမ်းဆောင်‌ခဲ့သည်။ "အရေးကြီးပြီ" ဆိုသောတိုက်‌ပွဲဝင်‌သီချင်းကို ထိုစဉ်‌ကရေးစပ်‌ခဲ့ခြင်းဖြစ်‌သည်။ ထို့နောက် မြို့ပေါ်‌သို့ပြန်‌လာပြီး အနုပညာလုပ်‌ငန်များကို ဆက်‌လက်‌လုပ်‌ဆောင်‌ခဲ့သည်။
၁၄-၈-၂၀၀၄ နံနက် ၁၁:၄၀ အသက်‌၄၂နှစ်‌အရွယ်‌တွင် ကွယ်‌လွန်‌ခဲ့သည်။
သူ့ကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေက သူ့ကိုအမှတ်တရအဖြစ် ထူးအိမ်သင်ဒေါ့ကွန်း (http://www.htooeainthin.com) ဟုသော ဝက်ဆိုဒ်လေးတစ်ခုကို ပူးပေါင်း တည်ဆောက်ပေးခဲ့ကြသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် သူ့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ငယ်ပေါင်းများဖြစ်သော တေးရေးဆရာများ၊ ကဗျာဆရာများ၊ စာရေးဆရာများနှင့် စာနယ်ဇင်းသမားများ စသည်တို့ရေးသားခဲ့ကြသည့် သူကွယ်လွန်ခြင်း ၂ နှစ်ပြည့်အမှတ်တရစာများကို သူ၏ ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာ သိမ်းတင်သား (ကြွက်နီ)မှ စီစဉ် စုစည်း၍ အစိမ်းရင့်ရောင်ရက်စွဲများ အမည်ဖြင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် ။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 2:28 PM0comments
ဦးမောင်မောင် (General Secretary of NCUB) ပြောချင်တဲ့ စကားများ၊ အပိုင်း (၁)
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 7:29 PM0comments
နည်းပညာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦး ကျောင်းတက်နေရင်း မြွေကိုက်ခံရပြီး သေဆုံးရခြင်းအပေါ် ဗကသ (နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီ)မှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်။
စာအမှတ် – ၀၅။ ၂၀၀၈
ရက်စွဲ – သြဂုတ် ၁၃။ ၂၀၀၈။
၁။ သြဂုတ်လ (၄)ရက်နေ့ မှာ ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူ မမြတ်ဆုမွန် ကျောင်းတက်ချိန်အတွင်း ကျောင်းစားသောက်ဆိုင်မှာ ထိုင်နေရင်း မြွေကိုက် ခံခဲ့ရသည်ဟု နအဖ. (၉)ရက်နေ့ ထုတ် သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ မြွေကိုက်ခံရတဲ့ မမြတ်ဆုမွန်ကို မြွေဆိပ်ဖြေဆေး အချိန်မှီ ထိုးနိုင်ခြင်း မရှိတဲ့အတွက် ဆေးရုံတစ်ရုံမှ တစ်ရုံကို ပြောင်းရွေ့ ရင်း လမ်းမှာတင် သေဆုံးသွားရသည်ဟုလည်း ဆက်လက် ရေးသားထားသည်။
၂။ ထိုသို့မြွေကိုက်သေဆုံးရခြင်းမှာ တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ တက္ကသိုလ် အင်္ဂါရပ်နှင့်အညီ တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ။ ဆေးခန်း မထားရှိခြင်းနှင့် ကျောင်းများကို မလိုအပ်ဘဲ ဝေးလံသီခေါင်သော အရပ်ဒေသများတွင် သွားရောက် ဖွင့်လှစ်ထား ခြင်းတို့ ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ ရှိရသည်။
၃။ ခေတ်မီနေသော ယနေ့ကမ္ဘာကြီးတွင် တိုင်းပြည်ကို ခေတ်မီဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း တဖွဖွ ပြောဆိုနေသည့် နအဖစစ်အစိုးရအနေနှင့် တက္ကသိုလ်တက်ရင်း ကျောင်းသူတစ်ဦး မြွေကိုက်သေဆုံးရသော အဖြစ်အပျက်သည် အစိုးရတစ်ခုအတွက် အလွန်ရှက်စရာကောင်းသော အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ယခု မမြတ်ဆုမွန် ကျောင်းတက်နေရင်း မြွေကိုက်သေဆုံးရသော ဖြစ်စဉ်ကို ပြန်ကြည့်လျှင် စစ်အစိုးရသည် ကျောင်းသားတွေကို တစ်နေရာတည်းတွင် စုစည်းမိမှာစိုးသည့် အချက်တစ်ခုတည်းကြောင့် မြို့ ပြင်တွင် ထုတ်ထားခြင်း၊ တက္ကသိုလ်တွေအတွက် လိုအပ်သော ဆေးရုံ။ ဆေးခန်းတွေနှင့် မထားရှိခြင်းနှင့် တိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုမရှိခြင်းတို့ ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ ရသည်။
၄။ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ မမြတ်ဆုမွန် မသေဆုံးသင့်ဘဲ သေဆုံးရတဲ့ ဖြစ်ရပ်အပေါ် ဗကသ (နိုင်ငံခြားရေးရာ ကော်မတီ). တွဲဖက်တာဝန်ခံ ကိုဇင်မောင်က ယခုကဲ့သို့ပြောခဲ့သည်၊
“တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရတစ်ခုအနေနဲ့တာဝန်ယူရမဲ့ ကိစ္စတွေမှာ တာဝန်မယူဘဲ လျစ်လျူရှူထားလို့အခုလို လူ့ အသက်တစ်ချောင်း မသေသင့်ဘဲ သေရတာပါ။ ဒါဟာ စစ်အစိုးရကနေ သူတို့ ကို ဆန့် ကျင်မှာကြောက်ပြီး ဖိနှိပ်မှု လက်နက်တစ်ခုသဖွယ် အသုံးပြုပြီး တက္ကသိုလ်တွေကို ဝေးလံတဲ့အရပ်တွေကို ပို့ ထားခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ကျောင်းသူတစ်ယောက် သေဆုံးရတာဟာ နအဖ စစ်အစိုးရအပေါ်မှာ လုံးလုံးတာဝန် ရှိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဒီဖြစ်ရပ်က နအဖရဲ့ပညာရေးစနစ်လက်အောက်မှာ မပြည့်မစုံနဲ့ပညာသင်ကြားနေရတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေရဲ့ဘ၀ကို မီးမောင်းထိုးပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်”။
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ ချုပ်။
သံဃာတော်များ ယခုထိ ဆက်လက်ကံဆောင်နေ
ကြည်ဝေ/ ရန်ကုန် သြဂုတ် ၁၃၊ ၂၀၀၈
ပြည်ထောင်စုပန်းတိုင်ဂျာနယ်၊ သြဂုတ်လ (၁) ရက်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:04 AM0comments
ပျောက်ဆုံးသွားသော ကချင်ကျောင်းသူ အလောင်း စစ်တပ်ဂိတ်အနီး တွေ့ရှိ အရေးယူမှု မရှိသေး၍ ဒေသခံများ မကြေလည်
သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်။
စစ်တပ်ဂိတ်အနီး အလောင်းပြန်တွေ့ခဲ့သည့် ကချင် ကျောင်းသူလေး သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၁၀ ရက် ကျော် ကြာလာသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာက ယခုချိန်ထိ ထိရောက် သော အရေးယူမှုများ မရှိသေးသဖြင့် ဒေသခံများ က အားမလို အားမရဖြစ်နေကြသည်။
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်၊ နန်ဆိုင်ကျေးရွာနေ အသက်(၁၅)နှစ်အရွယ်ရှိ ရှစ်တန်းကျောင်းသူ မအင်ခွန် ခေါင်ဒင်းသည် ဇူလိုင်လ(၂၇)ရက်နေ့က လယ်တောသို့ သွားစဉ် ပျောက်ဆုံးသွားသဖြင့် ဒေသခံလူထုက ရှာဖွေ ခဲ့ရာ ဇူလိုင်(၃၀)ရက်နေ့တွင် နအဖစစ်တပ်၏ ဂိတ်အနီး၌ မြေမြှုပ်ထားသော အလောင်းကို ပြန်တွေ့ခဲ့သည်။
ခမရ(၄၃၇)၏ အကောက်ခွန်ဂိတ်အနီးတွင် ဒဏ်ရာများဖြင့်သေဆုံးနေသည့် ရုပ်အလောင်း တွေ့ခဲ့ရသည်နှင့် ပတ်သက်၍ နန်ဆိုင်ရွာသားများနှင့်နီးစပ်သူ လိုင်ဇာမြို့မှ ကချင်လူငယ် တဦးက ယခုလို ပြောသည်။
“ရှာတွေ့တော့ အလောင်းက ခေါင်းမှာတွေလည်း ရိုက်ထားပြီး ကွဲနေတယ်။ မျက်စိတွေလည်း နှစ်ဖက် လုံးဖောက်ထားတယ်။ ချိုင်းကြားမှာတွေလည်း အချွန်တွေနဲ့ ထိုးထားတယ်။ အကုန်လုံးရစရာမရှိ အောင်လုပ်တယ်။ အခုအလောင်းကို ရှာရတဲ့နေရာက တရုတ်ပြည်ကို ကျွဲ၊ နွားတွေပို့တဲ့ လမ်းဘေး နားမှာ သူတို့နအဖစစ်တပ်ကနေ အကောက် ခွန်ကောက်တဲ့နေရာနဲ့ ပေနှစ်ရာ လောက်ဝေးတဲ့နေရာ မှာ မြုပ်ထားတာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒီမနက်က စစ်သားနှစ်ယောက်က ရပ်နေတယ်။ အဲဒီပတ်ဝန်းကျင် ရှိမှာဘဲဆိုပြီး ရှာတယ်။ ရှာတော့ ဒီမှာက တွေ့နေတယ်။”
Please do not click on READ MORE if you are under age of 18 or haveaheart condition.
အသတ်ခံလိုက်ရသူ ကချင်အမျိုးသမီး ပျောက်ဆုံးသည့် နံနက်ပိုင်းက လမ်းခုလတ်တွင် ခမရ(၄၃၇)စစ်တပ်မှ တပ်ကြပ် အေးသိန်းနှင့်စစ်သားနှစ်ဦး သူမအား နောက်မှ လိုက်နေသည်ကို ကျေးရွာသားအချို့က တွေ့ခဲ့ရသည် ဟု သူက ပြောသည်။
ကချင်အမျိုးသမီး အသတ်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မိုးမောက်ရဲစခန်းကို တိုင်တန်းထားသော်လည်း ခိုင်လုံသည့် သက် သေ မရှိ၍ ဆက်လက် အရေးယူခြင်းမရှိသည့်အကြောင်း ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။
“အလောင်းကို တွေ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ရဲစခန်းကို သွားတိုင်တယ်။ ရဲစခန်းက သက်ဆိုင်ရာကို တင်ပြ တယ်။ တင်ပြတော့ သူတို့က သက်သေခံပြပါလို့ ပြောပြတယ်။ အဲဒါ ဘာမှ စစ်ဆေး အရေးယူခြင်း မရှိဘူး။ရွာသားတွေတွေ့တာကတော့ စစ်တပ်က လူတွေ လိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့တယ်လေ၊ နောက်ဆုံး အခြေအနေက။”
အမျိုးသမီးမှာ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရပြီးနောက် အသတ်ခံရခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဒေသခံများ အနေဖြင့် ယူဆနေသော် လည်း အာဏာပိုင်များ အနေဖြင့် လူသေအလောင်းအား ဆေးစစ်ဆေးမှုမရှိကြောင်း ဒေသခံများကပြောသည်။
ရက်စက်စွာမုဒိန်းကျင့်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသော ကလေးငယ် အင်ခွန်ခေါင်ဒင်း၏ အလောင်း
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 5:48 PM0comments
ငြိမ်းချမ်းရေး တိုက်ပွဲ (မွန်းအောင်) (ဂျပန်ဖျော်ဖြေပွဲ - ၂၀၀၆)
ငြိမ်းချမ်းရေးတိုက်ပွဲ သီချင်းကို ၁၉၈၀ ၀န်းကျင်မှာ နာမည်ကြီးတေးရေးဆရာတဦးးက ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားမှာ ရေပန်းစားခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းမှာ ကိုမွန်းအောင်က သူ့တေးစုရဲ့ ခေါင်းစီးတေးသီချင်းအဖြစ် ဖြန့်ချိဖို့ စဉ်းစားခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မထုတ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
ခေါင်းစီးကို လွန်ခဲ့သောနေ့ အမည် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး စာသားအချို့ကို ပြင်ဆင်ကာ ကိုခင်မောင်တိုးက သူ့ရဲ့တေးစုတခုထဲမှာ သီဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကိုမွန်းအောင်ရဲ့ ပထမဆုံး တော်လှန်ရေးသီချင်း တေးစုကိုတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးတိုက်ပွဲ အမည်နဲ့ ၁၉၈၉ ခုနှစ်က ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်း ပြည်ပကို ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 1:31 PM0comments
၈၈၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံ အနှစ်(၂၀)ပြည့်၊ ဂျပန်ရောက်မြန်မာများ ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲ
မဆလအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးနှင့် မြန်မာပြည်တွင် ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ကျောင်း သား၊ သံဃာနှင့်ပြည်သူအများသွေးမြေကျ အထွေထွေသပိတ်ကြီးစတင်ဆင်နွဲတော်လှန်ခဲ့ကြသည့် ၈၈ အရေး တော်ပုံအနှစ် ၂၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဂျပန်ရောက်မျိုးချစ်မြန်မာများမှ လမ်းလျှောက်ချီတက်ပွဲနှင့် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုပွဲကို ယနေ့မွန်လွဲ ၂ နာရီခွဲမှစ၍ တိုကျိုမြို့တွင် ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ယခုကျင်းပသည့် ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲကို ဂျပန်နိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၃၂ ဖွဲ့မှ စုစည်းပူးပေါင်းပြုလုပ်ကြခြင်းဖြစ်ကာ ယခုအကြိမ်နှင့်ပါဆိုလျှင် ၁၂ ကြိမ်ခန့်ရှိသွားဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဂျပန်ဥက္ကဋ္ဌဦးလှိုင်အေးမှ ``ဒီနေ့မှာတွေ့ရတာကတော့ တိုင်းရင်းသားအခန်းကဏ္ဍတွေပါတယ်။ နောက်တခုက ဒီရှစ်လေးလုံးမှာပါတဲ့ ကျဆုံးသွားတဲ့သူတွေအတွက် လွမ်းသူပန်းခွေကို န.အ.ဖ အခွန်ရုံးရှေ့မှာ ချတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါက ခါတိုင်းနှစ်တွေထက်စာရင် တမှုထူးခြားတယ်ပေါ့၊ ဒီနှစ်မှာတော့ ကျနော်တို့မတွေ့မမြင် ဖူးတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေလည်း ဆန္ဒပြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်…``ဟု ၈၈ အနှစ် ၂၀ ပြည့် အခန်းအနား နှင့်ပါတ်သက်၍ ထူးခြားမှုများကိုပြောပြသည်။
ဆက်လက်၍ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှိုင်အေးမှပင်ကျနော်တို့စလုပ်စဉ်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်ဝန်းကျင်က လူဆယ် ဂဏန်းဘဲရှိခဲ့တယ်၊ ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းပြီးတဲ့အခါမှာ ရာဂဏန်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့၊ အခုရွှေဝါရောင် တော်လှန် ရေးပြီးတော့ ထောင်ဂဏန်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့..ဟုအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကို ဂျပန်ရောက်မြန်မာပြည်သူများ ပိုမိုစိတ်ပါဝင်စားလာပုံကိုပြောပြသည်။
ဂျပန်တွင်မြန်မာဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေနေသည့် လူမှုစီးပွားနှင့်နိုင်ငံရေးသတင်းဂျာနယ်တစ်ခုဖြစ်သည့် ဧရာဝဏ် မဂ္ဂဇင်းမှထုတ်ဝေသူနှင့်အယ်ဒီတာတဦးလည်းဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ်ထုတ်ဝေနေသည့် Voice of Burma သတင်းစာ စောင်တာဝန်ခံအဖြစ်လည်းဆောင်ရွက်နေသူ ဦးကျော်ကျော်စိုးမှ ``ဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲကိုကြည့်လိုက်ရင် အနှစ် ၂၀ ကြာပေမယ့်လည်း ဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေကြားထဲမှာ ရှစ်လေးလုံးစိတ်ဓါတ်က ရှင်သန်နေဆဲဘဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်….``ဟုပြောပြပြီး တော်လှန်ရေးမှာလှုပ်ရှားနေသူတွေ၊ ဦးဆောင်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ရှေ့လျှောက်လက်တွဲပြီးတော့ သွားနိုင်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် ကျနော် တို့မျှော်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဟာ အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟု မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး အတွက် ၄င်း၏အမြင်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြသည်။
အဆိုပါလမ်းလျှောက်ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွင် ဂျပန်ရောက်မျိုးချစ်မြန်မာလူမျိုးများအပြင် ဂျပန်လူမျိုးများပါ ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး တိုကျိုမက်ထရိုရဲတပ်ဖွဲ့၏စစ်တမ်းအရ လူပေါင်း ၈၇၀ ခန့်မှ `ရှစ်လေးလုံးနေ့ တို့မမေ့`၊ `နအဖစစ်အာဏာရှင်စနစ် တိုက်ဖျက်ပစ်`၊ `ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အားလုံး ချက်ချင်းလွှတ်`စသည့်ကြွေးကြော်သံများကို လမ်းလျှောက်ဟစ်ကြွေးတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါလှမ်းလျှောက်ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွင် နာဂစ်မုန်တိုင်းလေဘေးသင့်မြန်မာပြည်သူများအတွက် အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အလံတော်ပါ ခေါင်းပေါင်းနှင့်တဘက်များကိုလည်း ရောင်းချခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
PHOTO: U Than Win, Min Nyo Wan
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:34 PM0comments